🥇 အမြတ်အများဆုံးရရန် အညွှန်းအရောင်းအ၀ယ်အတွက် အကောင်းဆုံးပွဲစားများ။ ဇွန်လ 2022
အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုင်ရာ2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
အညွှန်းကိန်းအရောင်းအဝယ်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်များသို့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတရားမှာအညွှန်းကိန်းသည်အချို့သောစတော့စျေးကွက်များ၌ရောင်းဝယ်သောကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်စုကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် FTSE 100 သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ရောင်းဝယ်သောအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ပါဝင်သည်။
သာမာန်အားဖြင့်၊ သင်သည်တစ် ဦး ချင်းအမှာစာ ၁၀၀ ကိုလိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံအချိန်ကုန်သော်လည်းကောင်း၊ အဲဒီအစား, အညွှန်းကိန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီခွဲများကိုသူတို့ပေးရသည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုခံစားခွင့်ရှိသည်။
စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများအမှန်တကယ်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုရှာဖွေရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား သို့ဆိုလျှင် Index2Trading ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ 2022 သင်ခန်းစာ XNUMX ကုန်သွယ်မှု XNUMX လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိမ့်မည်။ အညွှန်းအရောင်းအဝယ်စတင်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားသည်။
မှတ်စု: CFDs များမှတဆင့် အတိုချုံးအညွှန်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စတော့ဈေးကွက်များ၏ တန်ဖိုးသည် ကျဆင်းသွားသည်ဟု သင်ထင်ပါက ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့်အညွှန်းသည်ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစ်စုတွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဘဏ္allowsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်အညွှန်းကိန်းသည်သတ်မှတ်ထားသောလဲလှယ်မှုတစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသောစတော့ရှယ်ယာများ၏ဈေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။ ဤဥပမာ၏ထင်ရှားသောနမူနာမှာ NASDAQ 100 ဖြစ်ပြီး၎င်းဖလှယ်မှုတွင်စာရင်းပြုစုထားသည့်အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုခြေရာခံသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်းသည်သင့်အားကုန်သွယ်မှု ၁၀၀ ပြုလုပ်စရာမလိုဘဲကုမ္ပဏီ ၁၀၀ နှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤသို့ဆိုလျှင်ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ တွင်တစ် ဦး ချင်းစီဝယ်ယူရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်ကိုသင်စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသလား။ သငျသညျပွဲစားအခကြေးငွေများအမှိုက်ပုံနှင့်အတူ hit ရမသာ, သင်မူကားအညွှန်းကိန်းကုမ္ပဏီအသစ်များထည့်သွင်းအဖြစ်နှင့်စတော့ရှယ်ယာအဆက်မပြတ်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချရန်လိုအပ်လိမ့်မယ်။ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်ပါကသင်၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသမျှကာလပတ်လုံးအမြတ်ဝေစုငွေပေးချေမှုမှသင်အကျိုးခံစားရပါလိမ့်မည် ETF. အကယ်၍ သင်သည် အညွှန်းကိန်းကို ကုန်သွယ်မှုပြုရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ CFDsမဟုတ်ဘူးလား။
စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာသင်သည်များပြားသောကုမ္ပဏီများအစုစုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအမေရိကန်နှင့်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ကိုခြေရာခံသည့် S&P 500 သည် ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ နှစ်စဉ်အမြတ်ငွေ ၉.၈% ရှိခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာသင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီကိုကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းထက်သင်ပိုမိုအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် ၉ ခုအတွင်းမှာအမေရိကန်ဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုမျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမယ့်စီးပွားရေးကအမြဲတမ်းပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်။
အထူးအရေးကြီးသည်မှာ၊ စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းအတွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုဒေဝါလီခံလျှင်ပင်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအထူးသဖြင့် S&P 500 ကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အချိန်တိုအတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက CFDs မှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောအညွှန်းတွင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုသာတိုပါကမည်သည့်စတော့ရှယ်ယာမဆိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနှင့်ပြတ်တောက်သွားပါကသင်သည်အပြည့်အ ၀ ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ဒက်ဘစ်၊ အကြွေးဝယ်ကတ်၊ e-wallet သို့မဟုတ်ဘဏ်အကောင့်များမှအလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်
စာသားစျေးကွက်ညွှန်းကိန်းရာနှင့်ချီ။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်ကုန်သွယ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အညွှန်းကိန်းများအကြောင်းကိုသင့်အားအကြံပေးလိုလျှင်အောက်ပါစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
S&P 500: Standard and Poor 500, သို့မဟုတ် 'S&P 500' သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အများဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အများဆုံးစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် NASDAQ နှင့်နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းသွင်းထားသောကုမ္ပဏီများပါ ၀ င်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအမေရိကန်စီးပွားရေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဆုံးစွန်သောကိရိယာဖြစ်သည်။
ဒေါင်းဂျုံးစ် သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်ဖြစ်ရင်တောင်မှ Dow Jones အကြောင်းကြားဖူးတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ Dow သည်အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်ကုမ္ပဏီ ၃၀ သာရှိသည်။ ၎င်းတွင်စက်မှုလက်မှုမျိုးစုံရှိအဓိကကျသောအမေရိကန်စတော့အိတ်ချိန်းနှစ်ခုလုံးတွင်စာရင်းပြုထားသည့်အကြီးစားကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။
FTSE 100- FTSE 100 သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံစတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက်၏အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီးလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုလုပ်ထားသောအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုခြေရာခံသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောယူကေစီးပွားရေးနှင့်ထိတွေ့မှုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
NASDAQ 100- အကယ်၍ သင်နည်းပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော NASDAQ လဲလှယ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်လိုပါက၎င်းသည် NASDAQ 100 ကိုကြည့်သင့်သည်။ အမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းဤသည် NASDAQ တွင်စာရင်းဝင်အကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုခြေရာခံသည်။ ဒီအညွှန်းကိန်းကို Apple၊ Microsoft နှင့် Amazon တို့လို Big Tech ကုမ္ပဏီများကလွှမ်းမိုးထားတယ်။
နစ်ကေး ၂၂၅: Nikkei 225 သည်တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်အကြီးဆုံးသောကုမ္ပဏီ ၂၂၅ ခုကိုခြေရာခံခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်တိုယိုတာ၊ ဂျပန်ဆေးရွက်ကြီး၊ ဟွန်ဒါ၊ နီကိုွန်နှင့် Yamaha တို့ပါဝင်သည်။
ရပ်စယ်လ် ၂၀၀၀: S&P 500 နှင့် Dow Jones နှင့်မတူဘဲ Russell 2000 သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီငယ်များအားခြေရာခံသည်။ ဤအညွှန်းကိန်းတွင်ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၀၀၀ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အမေရိကန်စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားစေရန်အခြားကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ၊ စတော့ဈေးကွက်တစ်ခုစီအတွက်ညွှန်းကိန်းတစ်ခုမျှမရှိကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်နည်းပြောရရင် FTSE 100 ကိုမင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တယ်ဆိုရင် FTSE 100 ကိုတစ် ဦး တစ်ယောက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား, သင်သည်အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူပိုက်ဆံရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည် ပံ့ပိုးပေးသူ။ စျေးကွက်တွင်အညွှန်းပေးသူများရာနှင့်ချီ။ ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်သူတို့၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။
အရေးကြီးသည်မှာအညွှန်းပေးသူ၏အခန်းကဏ္ the သည်အညွှန်းကိုဖွဲ့စည်းသောကုမ္ပဏီများ၏အမှန်တကယ်ကမ္ဘာတန်ဖိုးကိုခြေရာခံရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာပေးသူကသင့်အား Dow Jones တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယင်းကိုလွယ်ကူစွာအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် Dow သည်ကုမ္ပဏီ ၃၀ လုံးတွင်ရှယ်ယာများဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်အညွှန်းသည်ခြေရာခံရန်တာဝန်ပေးထားသည့်ကုမ္ပဏီများ၏အမှန်တကယ်ကမ္ဘာတန်ဖိုးကိုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်သောအခါသင်ကရှယ်ယာဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြင့်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်အက်ပဲတွင်ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ဖြင့်ရှယ်ယာတစ်ခုဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်လာ ၃၀၀ ဖြင့်ရောင်းချလျှင်၎င်းသည်အမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။ သင်၏အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမေးခွန်း၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
သို့သော်အညွှန်းကိန်းများကို 'အချက်များ' ၌သာအမှန်တကယ်သတ်မှတ်ထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ပေါင်စတာလင်တို့ကဲ့သို့သောငွေကြေးများမဟုတ်ပါ။ ဤဥပမာ၏အဓိကဥပမာမှာ S&P 500 ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေးသားချိန်တွင် ၂,၈၆၃ မှတ်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးသော်လည်းအညွှန်းကိန်းများကိုစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုထားကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုသော် FTSE 100 တွင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည်ဟုဆိုပါစို့။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် Vanguard ကဲ့သို့သောပံ့ပိုးသူကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဤဥပမာတွင်သင်သည်လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်ထားသော 'Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing' တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။
စတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများကိုအချက်များဖြင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ဖူးသော်လည်း Vanguard ကဲ့သို့သောတိကျသောပံ့ပိုးသူနှင့်သင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့်အခါထိုသို့မဟုတ်ပါ။ ပြီးနောက်, အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေကိုလန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းပြုထားသဖြင့်၎င်းကိုပေါင်နှင့် pence ဖြင့်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။
စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးသည်အမှတ်ဖြင့်စျေးနှုန်းရှိသော FTSE 100 အညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်နေလျှင်တက်သွားလိမ့်မည်။ ဥပမာ Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing ကိုရေးသားစဉ်ကပေါင် ၂၆.၂၅ နှင့်စျေးနှုန်းမှာပေါင် ၂၆.၂၅ ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ် FTSE 26.25 အညွှန်းကိန်းမှာ ၅,၉၉၁ မှတ်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ Vanguard ၏အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေကိုပေါင် ၂၆.၂၅ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အခြားပံ့ပိုးသူများအား - ကွဲပြားသော်လည်းစျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သော်လည်းအညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီသည်တူညီသောစတော့ ၁၀၀ ကိုခြေရာခံလျက်အလားတူပုံစံမျိုးဖြင့်တက်သွားသင့်သည်။
✔️ အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများကို 'အလေးချိန်' ထားပါသည်
အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်သည်ချိန်ခွင်ဖြစ်သင့်သည့်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အညွှန်းကိန်းတွေဟာအလေးချိန်ရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကအချို့သောစတော့များသည်အခြားအရာများထက်အညွှန်း၏စျေးနှုန်းအပေါ်ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြီးမားသောစျေးကွက်အရင်းအနှီးရှိသည့်ကုမ္ပဏီသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်ကုမ္ပဏီများထက်ပိုမိုကြီးမားသောအလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။
NASDAQ ၁၀၀ ကိုဥပမာအနေနှင့်ယူကြည့်ရအောင်။ အညွှန်းကိန်းတွင်ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀၀ ပါ ၀ င်သော်လည်း ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်တရားမျှတမှုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် သုံး ကုမ္ပဏီများ - Microsoft၊ Apple နှင့် Amazon ။ ဤကုမ္ပဏီသုံးခုသည်အညွှန်းကိန်း၏ ၁၀-၁၁% ကိုဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း Fox Corp, Ultra Beauty နှင့် United Airlines တို့ကအညွှန်းကိန်း၏ ၀.၁% အောက်သာရှိသည်။
အညွှန်းအရောင်းအဝယ်ရန်ပုံငွေအားလုံးသည်၎င်းတို့၏အလေးချိန်စနစ်ကိုဈေးကွက်အရင်းအနှီးအပေါ်အခြေခံသည်မဟုတ်ကြောင်းမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာ Dow Jones သည်ကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးနှုန်းကိုအဓိကထားသောထူးဆန်းသည့်ချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် Coca Cola သည် 3M ထက်ပိုမိုကြီးမားသည့်တန်ဖိုးရှိသော်လည်းရှယ်ယာစျေးနှုန်းသည်လေးဆနီးပါးမြင့်မားသောကြောင့်အမြင့်သည်အလေးချိန်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
အညွှန်းတစ်ခုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်ကိုထင်ဟပ်စေရန်၎င်းသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် FTSE 100 သည်စျေးကွက်အရင်းအနှီး၏အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုကြည့်ရှုသောအခါအညွှန်း၏ပြင်ပရှိကုမ္ပဏီများသည်အမြဲတမ်းချိန်ညှိထားသောအညွှန်းကိန်း၏အောက်ဘက်သို့ရောက်ရှိနေသောကုမ္ပဏီများထက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
သို့သော်ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသူများအနေဖြင့်စတော့ရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်လိုအပ်သောကြောင့်၊ အညွှန်းတစ်ခုအတွင်းရှိကုမ္ပဏီများကိုအဆက်မပြတ်ထည့်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအိပ်မက်ဆိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေနှင့် FTSE 100 နှင့် S&P 500 တို့ကဲ့သို့သောညွှန်းကိန်းများသည်သုံးလတစ်ကြိမ်တွင်အခြေခံမိတ်ကပ်များကိုပုံမှန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်လိမ့်မည်။
ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီသစ်များကိုအညွှန်းတွင်ထည့်သွင်းလျှင်ပင်၎င်းသည်သင့်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မထိခိုက်စေပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ထားကြောင်းသင်သတိထားမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ၊ အကြောင်းမှာရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသူကယင်းကိုဂရုစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အညွှန်းအရောင်းအဝယ်: ETFs နှင့် CFDs
ဒါကြောင့်ယခုသင်သည်အညွှန်းကိန်းများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိခြင်းနှင့်ထွက်ခြင်းတို့ကိုသိပြီ ဖြစ်၍ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမည်သို့ကိုယ်စားပြုသည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည် ETF သို့မဟုတ် CFD ပုံစံဖြင့်လာလိမ့်မည်။
သင်သည်ရေရှည်မြင့်မားစွာကွဲပြားခြားနားသောအညွှန်းကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရှာဖွေနေပါက ETF (Exchange-Traded Fund) ကိုရွေးချယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအနေဖြင့် ETF ကို Vanguard သို့မဟုတ် BlackRock ကဲ့သို့သောပထမအဆင့်ဘဏ္financialာရေးအဖွဲ့အစည်းကစီမံလိမ့်မည်။
CFDs (Contract-for-Difference) ၏ဖြစ်ရပ်တွင်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်မပိုင်ဆိုင်ပါ။ CFD များကိုပွဲစားများကဖန်တီးကြသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတရားအရ CFD များသည်အညွှန်းကိန်းတစ်ခု၏အမှန်တကယ်စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။
စင်စစ်အားဖြင့် CFD သည် Vanguard ကဲ့သို့ ETF ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးပေးသူကိုခြေရာခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ CFD ပံ့ပိုးသူသည်အညွှန်းကိန်းဖြစ်သောကုမ္ပဏီများတွင်မည်သည့်အစုရှယ်ယာမ ၀ ယ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
ETF ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသူသည်ညွှန်းကိန်းတွင်ပါ ၀ င်သောရှယ်ယာများကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ထားသဖြင့်သူတို့သည်အမြတ်အစွန်းများခံစားခွင့်ရှိသည်။ FTSE 100 သို့မဟုတ် S&P 500 တို့ကဲ့သို့သောပိုမိုကြီးမားသောအညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများအနေဖြင့်ပံ့ပိုးသူသည်လတစ်လျှောက်လုံးအမြတ်ငွေရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်အမြတ်အစွန်းပေးငွေများကိုသူတို့ရရှိသည့်အချိန်နှင့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခြင်းနှင့်အကုန်အကျများလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝေစုကိုသုံးလတစ်ကြိမ်လက်ခံရရှိဖွယ်ရှိသည်။
ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ယူခြင်းမရှိသောကြောင့်သင် CFD တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါကထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်မည်သည့်ခွဲဝေပေးငွေကိုမျှခံစားခွင့်မရှိပါ။
သင်ဟာ ETF (သို့) CFD ကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေမည်သို့သောတန်ဖိုးဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ပေါင်စတာလင်ကဲ့သို့သောငွေကြေးဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ETF အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများတွင်ဘဏ္,ာရေးတူရိယာကိုအဓိကစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်စာရင်းပြုလိမ့်မည်။
ဥပမာ Vanguard မှဆွေးနွေးခဲ့သော FTSE 100 အညွှန်းကို London Stock Exchange တွင်စာရင်းပြုသည်။ ၎င်းသည် ETF တွင်အလွယ်တကူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သကဲ့သို့သင်၏ငွေကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။
CFD များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်း၏ဖြစ်စဉ်မှာမူတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် CFD ၏တန်ဖိုးသည်၎င်းခြေရာခံနေသည့် ETF ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။
Leverage နှင့် Short Selling
ETF အညွှန်းကိုရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါသင်၏အကောင့်လက်ကျန်ငွေထက်ညီမျှသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပမာဏဖြင့်သာသင်ရောင်းဝယ်တော့မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ပွဲစားစာရင်းတွင်ပေါင် ၁၀၀၀ ရရှိပါက၎င်းထက်ပိုရောင်းဝယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
CFDs ကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒါကသြဇာသက်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်ကသင့်အကောင့်ရှိငွေများထက်ငွေပိုကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုသည် - ပွဲစားမှငွေချေးသောအတိုးနှုန်းနည်းသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ယူကေသို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်အခြေစိုက်ပါက ESMA ကန့်သတ်ချက်များသည်သင့်အား ၂၀း၁ အထိသြဇာရှိသည့်အဓိကစတော့ရှယ်ယာအညွှန်းများကိုကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ£ 20 လက်ကျန်ငွေသည် S&P 1 တွင် CFD တန်ဖိုး ၄ ပေါင်ဖြင့်သင်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
အလားတူစွာအစဉ်အလာအညွှန်း ETFs များကသင့်အား“ ရှည်လျားစွာ” သွားရန်သာခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တန်ဖိုးမြင့်တက်လာမည်ဟုသင်ခန့်မှန်းနေသည်။ CFDs မှတစ်ဆင့်အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ကသင့်အားတိုတိုသွားစေနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းသည်တန်ဖိုးကျမည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်အမြတ်ရနိုင်သည်။
အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်
ဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများအားလုံးကဲ့သို့ပင်သင်အညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်မှုအတွက်အခကြေးငွေပေးရပါမည်။ တိကျသောစျေးနှုန်းပုံစံသည်သင်ရွေးချယ်ထားသောပွဲစားအပေါ်တွင်သာမူတည်သည်မဟုတ်သော်လည်းသင်သည် ETFs သို့မဟုတ် CFDs များကိုရွေးချယ်သည်လား။
ဒီလိုပြောခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်တဲ့အခါသင်ပေးရမယ့်အဓိကအခကြေးငွေအချို့ကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
သင်သည် CFDs သို့မဟုတ် ETFs များကိုအရောင်းအဝယ်ပြုသည်ဖြစ်စေမည်သို့ပင်ငွေပေးချေရန်အမြဲလိုအပ်လိမ့်မည် ပျံ့နှံ့။ သတိမထားမိသူများအတွက်ဤသည်မှာပစ္စည်းတစ်ခု၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။ ပွဲစားများက၎င်းတို့အားအမြဲတမ်းငွေရှာသည်။ ပြန့်ပွားလေလေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ကုန်ကျလေလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုများကိုပေးနိုင်သည့်အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အမြဲတမ်းသွားသင့်သည်။
ညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေကိုသင်ဝယ်ယူသောအခါသင်သည်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ CFD အညွှန်းကိန်းများအရ၎င်းသည်သင်ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် Dow Jones အညွှန်းကို ၀ ယ်ရန်အမှာစာပေါင် ၅၀၀ နှင့် အကယ်၍ ပွဲစားက ၀.၅% ကောက်ခံလျှင်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်ကို£ 500 ပေးလိမ့်မည်။
ETFs များအနေဖြင့် CFD ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသောအခကြေးငွေများကိုသင်ပေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍များ အကယ်၍များ ဒီအတိုင်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဘယ်လောက်ပဲရင်းနှီးမြှပ်နှံပါစေအခကြေးမတူပါ။
အကယ်၍ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်သည်သင်၏ပွဲစားများမှငွေတောင်းခံလျှင်သင်၏ရာထူးနေရာကို၎င်း၊ သင်ပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းကိုသင်ပေးရမည်။
သင် ETF မှတဆင့်အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများကုန်သွယ်လျှင်သာကုန်ကျစရိတ်အချိုးအစားသက်ဆိုင်သည်။ ဤသည်အထူးသဖြင့်အခကြေးငွေ ETF အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေလည်ပတ်နှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အခြေခံသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတွင်ကုန်သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်ပတ်ခြင်း၊ အစုရှယ်ယာအချို့ကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ များသောအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်အချိုးသည်နှစ်စဉ် ၁% အောက်သာရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အသံကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးယနေ့သင်သည်အကောင့်တစ်ခုနှင့်စတင်ချင်လျှင်၊ သင်ယခုသင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြတော့မည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းအညွှန်းကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
အဆင့် ၁ - ETFs သို့မဟုတ် CFDs များကိုသင်ရောင်းဝယ်ချင်လားရွေးချယ်ပါ
သင်၏ပထမဆုံးခေါ်ဆိုမှုဆိပ်ကမ်းသည်သင်အသုံးပြုလိုသောအညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာအမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရေရှည်တွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ရန်ပုံငွေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုလျှင် - ပုံမှန်အမြတ်အစွန်းပေးငွေများမှသင်အကျိုးခံစားလိုပါက ETF အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်သင်သည်ညွှန်းကိန်းများကိုရေတို အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက - သြဇာရှိခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိလျှင် CFD အတွက်သင်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
အဆင့် ၂ - အညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်ကိုရှာပါ
CFDs (သို့) ETFs တွေကိုရွေးချယ်ချင်တယ်ဆိုတာသင်သိပြီဆိုရင်ကုန်သွယ်ရေးညွှန်းကိန်းတစ်ခုရှာရန်လိုအပ်သည်။ စာသားများအရထောင်နှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်သင့်အားအညွှန်းရန်ပုံငွေများကိုရယူရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်တစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ယခုပင်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးရှိကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းငါးခုကိုဖော်ပြထားသည်။
သင်ကြည့်ချင်သောအညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်တစ်ခုကိုသင်တွေ့ပြီဆိုလျှင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်အချို့ပေးရန်လိုအပ်သည်။
ထို့နောက်သင်၏သမိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်အချို့ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားသည်သင့်အားသြဇာနှင့်ကုန်သွယ်ရန်စွမ်းရည်ရှိသင့်၊ မသင့်ကိုပွဲစားကသိသည်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုဖို့လိုတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ပြီးသင်၏ပတ်စ်ပို့သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူကိုတင်ရန်သာလိုအပ်သည်။ ပလက်ဖောင်းအများစုသည်စာရွက်စာတမ်းကိုချက်ချင်းအတည်ပြုလိမ့်မည်။
သင်ကတကယ့်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးနဲ့အညွှန်းတွေကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်မှာဖြစ်လို့သင်ရံပုံငွေအချို့ကိုသွင်းဖို့လိုလိမ့်မည်။ အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုဒ်များသည်သင့်အားရိုးရာဒက်ဘစ်ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) ဘဏ်အကောင့်မှတဆင့်ငွေထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
e-wallet ကဲ့သို့သော e-wallet ကို အသုံးပြုရန် သင့်တွင် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိနိုင်သည်။ PayPal က or Skrill. အညွှန်းကိန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်အများစုသည် သင်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်သည့် အနည်းဆုံးအပ်ငွေပမာဏကို ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၅ - ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အညွှန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
၏ဤအဆင့်မှာ ဖြစ်စဉ်, သင်ယခုငွေကြေးထောက်ပံ့သောအပြည့်အဝစုံသောအညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်အကောင့်ရှိသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကသင်ကုန်သွယ်ရန်အညွှန်းတစ်ခုရှာရန်လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်တိကျသောအညွှန်းကိန်းတစ်ခုထားရှိပါက၎င်းကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သင့်သည်။ မရရှိပါကသင်ရွေးချယ်ထားသောပလက်ဖောင်း၏အညွှန်း (မကြာခဏညွှန်းကိန်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်) အပိုင်းကိုကြည့်ရှုပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်အတွက်သင်သည်ယခုမှာယူရန်လိုအပ်သည်။ နည်းလမ်းအတိအကျသည်သင် ETF (သို့) CFD ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည် ETF ဖြစ်လျှင်
CFD ဖြစ်ရင် -
သင်ကြာမြင့်စွာသွားလိုပါသလား (အမှာစာဝယ်ရန်) သို့မဟုတ်တိုတောင်းမည် (ရောင်းရန်အမှာစာ)
Stop-loss နှင့် / သို့မဟုတ်ယူ - အမြတ်စျေးနှုန်းရိုက်ထည့်ပါ
ဝယ် / ရောင်းရန်အတည်ပြုပါ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအညွှန်းရန်ပုံငွေသို့ CFD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ETF ထက် ပို၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
အကောင်းဆုံးအညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်များကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီအကောင်းဆုံးအညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်သုတေသနပြုရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်အဓိကမက်ထရစ်များစွာရှိသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုဒ်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်သေချာစေရမည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့ပါကရှောင်ရှားပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အနည်းဆုံးစည်းမျဉ်းလိုင်စင်တစ်ခုရှိသည် - တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပို၍ ဖြစ်သည်။ ဤသည်များ၏အကြိုက်ပါဝင်သည် FCA (ယူကေ)၊ CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် ASIC (Australiaစတြေးလျ) ။
ပွဲစား၏စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုသင်သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်ကြောင်းစူးစမ်းလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရရင်အွန်လိုင်းအာကာသမှပွဲစားတိုင်းနီးပါးသည်ရန်ပုံငွေစာရင်းကိုစာရင်းပြုထားသော်လည်း CFDs လား ETFs ဟုတ်မဟုတ်သင်အကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။ eToro ၏ဖြစ်ရပ်တွင်ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားထိုနှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်အညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်ရေးဆိုက်သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ရန်ပုံငွေကိုပွဲစားစာရင်းသို့ငွေရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာငွေချက်ချင်းအသိအမှတ်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ debit / credit သို့မဟုတ် e-wallet မှတဆင့်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ရန်ပုံငွေများရှင်းလင်းရန်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရပါလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ကျသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောအညွှန်းကုန်သွယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသည့်အခကြေးငွေကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင်စရိတ်အချိုးများကိုအထူးဂရုပြုပါ။
သင့်တွင်တိကျသောညွှန်းကိန်းတစ်ခုရှိနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနအချို့ပြုလုပ်လိုသည့်အချိန်ရောက်လာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သုသေသနပြုမှုဌာနကိုကမ်းလှမ်းသောအညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်များနှင့်ကပ်ထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်နည်းပညာနှင့်အခြေခံများပါ ၀ င်သင့်သည်။
အသစ်သောအညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်ရေးဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်အရာမရှိပါ။ ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည်တန်းတူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်ကမ်းလှမ်းသည့်ပံ့ပိုးမှုအမျိုးအစားများကိုကြည့်ရန်စစ်ဆေးပါ။ အကောင်းဆုံးအညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းမှတစ်ဆင့်အထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
သင်တစ် ဦး ပလက်ဖောင်းသုတေသနဖို့အချိန်မရှိကြပါဘူး? အောက်တွင် ၂၀၂၀ ၏အညွှန်းကိန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက် ၅ ခုကိုသင်အောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်စစ်ဆေးပြီးသည့်ပွဲစားများအားလုံးသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုပုံနှိပ်ထားသည်။ CFDs များ၊
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ US, UK, Japan နှင့်အခြားနေရာများတွင်ရှိသောစတော့ရှယ်ယာများနှင့်ထိတွေ့လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ သင်သည်ရာနှင့်ချီသောကုမ္ပဏီများကိုကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ဤသည်ကမြင့်မားစွာကွဲပြားအစုရှယ်ယာအစုစုကိုဖန်တီးရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းစေသည်။
အညွှန်းရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာသင်သည်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ခွဲဝေပေးငွေများရရန်ကြိုးစားသူများအတွက် ETFs သည်လုံလောက်လိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော်သင်သည်တိုတောင်းသောသက်တမ်းကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းများကိုကုန်သွယ်လိုပါက CFD များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, ငါတို့လမ်းညွှန်အညွှန်းကိန်းကုန်သွယ်မှုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်အပေါ်အခိုးအငွေ့ရှင်းလင်းကူညီပေးခဲ့တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ချက်ချင်းကုန်သွယ်မှုအကောင့်တစ်ခုနှင့်စတင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်စစ်ဆေးထားသောအညွှန်းကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ် ၅ ခုအနက်မှတစ်ခု၏တန်ရာကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင် ETF အညွှန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှသာ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိလျှင်သင်ရှယ်ယာခွဲဝေမှုကိုသင်ပိုင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည် - သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ပမာဏနှင့်အချိုးကျသည်။
ရည်ညွှန်းရန်ပုံငွေ CFD ဆိုတာဘာလဲ။
အကယ်၍ သင်သည် CFD မှတစ်ဆင့်အညွှန်းရန်ပုံငွေတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကသင်သည်နောက်ခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား CFD သည် ETF အညွှန်း၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုခြေရာခံရန်ရိုးရှင်းစွာတာ ၀ န်ပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်ရွေးချယ်သောအညွှန်းကိန်းကိုသြဇာသက်ရောက်စေရန်နှင့်တိုတောင်းသောရောင်းအားကိုခွင့်ပြုထားသော်လည်းသင်ခွဲဝေခွင့်ကိုခွင့်မပြုပါ။
FTSE 100 ကဲ့သို့သော index fund တစ်ခုချင်းစီတွင်သင့်အား index ကိုရရှိနိုင်သောပံ့ပိုးပေးသူများစွာရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၏တန်ဖိုးကိုပံ့ပိုးသူများ၏စတော့စျေးနှုန်းအရကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်အညွှန်းကိန်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံရန်တူညီသောနည်းလမ်းရှိရန်လိုအပ်သည့်အတွက်အချက်များကိုဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။
သင်တစ် ဦး အညွှန်းကိန်းရန်ပုံငွေအတွက်ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသလဲ?
အကယ်၍ သင်သည်ရိုးရာအညွှန်းကိန်း ETF တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကပံ့ပိုးသူသည်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ETF စာရင်းရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ETF ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည် CFDs အညွှန်းများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလျှင်အွန်လိုင်းပွဲစားတစ် ဦး နှင့် ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်အမှာစာပေးရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဗြိတိန်သို့မဟုတ်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်အခြေစိုက်ပါကသင်လုပ်ဆောင်မည့် ESMA ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင်ရောက်နေပါက ၂၀း၁ ကို S&P 20 ကဲ့သို့သောအဓိကညွှန်းကိန်းများအပေါ်မှီခိုပါလိမ့်မည်။ သင်နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဟာပိုပြီးသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဘဏ်ငွေလွှဲ၊ အကြွေး / အကြွေးကဒ်သို့မဟုတ် e-ပိုက်ဆံအိတ်မှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အညွှန်းအရောင်းအ ၀ ယ်ငါဘယ်အခကြေးငွေပေးရမလဲ။
ETF အညွှန်းကိန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်နှစ်စဉ်အသုံးစရိတ်အချိုးကိုပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ CFD ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်တခုကိုကောက်ခံလိမ့်မယ်။